कोरोना नियन्त्रण कार्यदललाई नागरिकको पत्र – Chitwan Post
कोरोना नियन्त्रण कार्यदललाई नागरिकको पत्र
प्रमुख समाचार, विचार
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण कार्यदल
विषय : चितवनमा प्रयोगशाला निर्माणको आधार रहेको सम्बन्धमा ।
संयोजकज्यूसँग भेटेरै धेरै कुरा गर्न मन थियो । तर, कोरोनाले उत्पन्न लकडाउनले नै यो सम्भव भएन । त्यसैले मैले पत्रैमार्फत आफ्नो कुरा राख्ने जर्मको गरेको छु । अहिले कोरोना संक्रमणको महामारीले विश्व नै प्रताडित छ । विश्वका मै हूँ भन्ने देशलाई पनि यसले हायल कायल बनाइरहेको छ । छिमेकी देश चीनको वुहानवाट सुरु भएको यो रोगले अहिले विश्वका २०० देशका नागरिक पीडित भैसकेका छन् । मंगलबार यो पत्र तयार हुने बेलासम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको जानकारीअनुसार यो रोगले विश्वभर झन्डै आठ लाख मानिस संक्रमिति र करिब ३८ हजारको मृत्यु भएको छ ।
कैयौँ विकसित र सबै स्रोतले भरिपूर्ण देशमा समेत यसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न चुनौती देखा परेको सन्दर्भमा नेपालीहरु भने अलिकति भए पनि भाग्यमानी नै मान्नुपर्छ, अहिलेसम्म पाँच जना बिरामी भेटिएका छन्, ती पनि सबै विदेश बसेरै आएका ।
चितवनवासी त्यसमा पनि अझै बढी भाग्यमानी छन् । अहिलेसम्म एक जनामा पनि यो रोग देखिएको छैन र कहिल्यै नदेखियोस् पनि । यो रोगले महामारीको रुप नलियोस् भनेर अपनाइएको विशेष सर्तकताकै कारण होला नेपालमा कोरोनाको संक्रमणको अवस्था नियन्त्रणभित्रै भएको । तर, यो बेला नेपालमा संक्रमण कमी छ भनेर खुसी मान्ने बेला पनि हैनजस्तो मलाई लाग्छ । अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ ।
मेडिकल सिटीका रुपमा परिचित चितवनको हकमा करोना अस्थायी अस्पताल निर्माण गरेर तपाईंहरुले राम्रो काम गर्नुभएको छ । यसको म प्रशंसक नै हुँ, भलै त्यहाँको पूर्वाधार के कस्तो छ भन्ने कुरा छुट्टै बहसको विषय होला । हरेक स्थानीय निकायले क्वारेन्टाइनका लागि सार्वजनिक निकायहरु खोजी गरिरहेका छन् । भरतपुर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजले पनि आवश्यकताअनुसार कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न आइसोलेसन कक्ष बनाउँदै अघि बढिरहेका छन् । यो रह्यो पूर्वाधारका कुरा, भोलि महामारी भइहालेमा उपचार गर्न सकिने सवाल पक्ष । तर, मैले यहाँ उठाउन खोजेको सवालचाहिँ उपचारसँगै रोग पहिचानको कुरा हो ।
जसरी स्थानीय तह र अस्पतालहरुको संयोजन गरेर चितवनमा तपाईंहरुले कोरोना अस्पताल बनाउनुभयो, त्यसैगरी भरतपुरमा नै कोरोना परीक्षण ल्याब स्थापना गर्न सकिने आधार देखिन्छ । कृषि तथा वन विश्वविद्यालय रामपुरसँग पिसिआर मेसिन पनि छ । राष्ट्रिय पक्षी अन्वेषण केन्द्रको प्रयोगशाला देशकै उत्कृष्ट प्रयोगशाला चितवनकै भरतपुरमा छ । जसमा अहिले पनि पक्षीसँग जोडिएका विभिन्न रोगहरुको परीक्षण भइरहेका छन् । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र दुई मेडिकल कलेजसँग भएका माइक्रोवायोलोजिस्टहरु प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था छ ।
विश्व स्वास्थ्य सगठनको मापदण्ड पूरा भए/नभएको, जैविक सुरक्षाको प्रबन्ध भए/नभएको टेकुका प्राविधिकहरुलाइ एकपटक बोलाएर परीक्षण गर्दै सरकारसँग कीट सहयोग मागेर सजिलै चितवनमा कोरोनाको परीक्षण गर्न ल्याब बनाउन सकिने अवस्था छ । स्थानीय तहमा संयोजन गर्दैमा हुने काम गर्न किन ढिलाइ गर्नु ? के केन्द्रको मुख ताकेर बस्नुमात्रै उचित हो र ?
यो त अहिले आउन सक्ने उच्च ज्वरोको महामारीको कुरा भयो । चितवनमा हरेक वर्षजसो फैलिरहने नयाँ–नयाँ ज्वरोको प्रजातिका बारेमा तपाईंहरु पक्कै अनभिज्ञ हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ ।
कुनै बेला मलेरियाको उद्गम थलोका रुपमा चिनिएको चितवन राप्ती दुन परियोजनाले बसाइँ बसाएसँगै मलेरियाको उन्मूलन भएको देखिन्छ । यद्यपि, अहिले पनि फाट्टफुट्ट मलेरिया भएका बिरामी नभेटिने हैनन् । २०५९ सालमा चार जनाको ज्यान लिने गरी टाइफाइडको महामारी भएको चितवनमा २०६१ मा डेँगुको पहिलो पहिचान भएको तथ्य भेटिन्छ । यो नेपालमै पहिलो थियो । नेपाल घुम्न आएका एक विदेशी नागरिकलाइ डेँगु पहिचान भएको हो ।
२०६३ मा स्क्रबटाइपसको महामारी भएको चितवनमा २०६५ मा डेँगुले दुःख दियो । २०७३ मा स्क्रबटाइपस, २०७४ मा स्वाइनफ्लूले बिरामीको ज्यानै लिएको चितवनमा २०७५ र २०७६ को सुुरुका महिनाहरुमा स्क्रबटाइपस र डेँगुको संक्रमण थियो भने वर्ष सकिँदै गर्दा अहिले कोरोना संक्रmमणको त्रास छ । यही बेला विगतका वर्षहरुमा सिजनल फ्लूले महामारीकै रुप लिएको पाइन्थ्यो । हरेक वर्ष जसो हजारौ मानिस यसरी नै ज्वरोले थलिने चितवनलाई अहिले पनि विश्वव्यापी महामारी भएको कोरोनाको संक्रमणको सबभन्दा जोखिमको जिल्लाका रुपमा लिइन्छ ।
यहाँको ज्वरोको कारण पहिचान गर्न धेरैपटक सरोकार निकायहरु छलफलमा जुटेकै हुन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत यहाँको ज्वरोलाई उच्च प्राथमितता दिएर अध्ययन गर्दै आइएको हो । तर, वषौँ भयो बर्सेनि रुप फेरेर आउने ज्वरोको कारण के हो निष्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन । यही बेला अहिले विश्वभर कोरोनाको महामारी भइरहेका बेला चितवनमा सिजनल फ्लूको संक्रमण हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । कतै सिजनल फ्लू हुँदै गर्दा भोलि कोरोनाको संक्रमण हो कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । अहिले देशैभरका विभिन्न अस्पतालहरुमा मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ । तर, परीक्षण कोरोना नेगेटिभ आएको छ । यसको अर्थ पनि यहाँ निमोनिया बनाएर मान्छे मार्ने अन्य रोगहरु पनि छन् भन्ने हो । कोरोनासँगै यसका बारेमा पनि अध्ययन हुन जरुरी छ । जसका लागि पनि राम्रो प्रयोगशाला चितवनमा आवश्यक देख्दछु म । यो तपाईंहरुको सानो पहलले पूरा हुन सक्छ ।
एउटा चितवनवासी शुभेच्छुकको यो चाहना पक्कै पनि तपाईंबाट पूरा हुने अपेक्षा गरेको छु । कोरोना महामारीको अवस्था आइहाले तपाईंप्रति चितवनवासीकै ठूलो भरोसा छ । यसतर्फ ध्यान दिनुहोला । धन्यवाद ।
२०७६ चैत १७ गते ।
धादिङका एम्बुलेन्स चालकले बनाए पिपिई
फोर्ब्स कलेजले सुरु गर्‍यो अनलाइन कक्षा